Man United Oo Mush’ahar Kordhin Labba Jibbaar Ah Ku Abaalmarisay Xiddigan Wacdaraha Dhigaya – Garsoore Sports
Kooxda Manchester United ayaa mush’ahar kordhin labba jibbaaran ku abaalmarineysa xiddig kamid ah xiddigaheeda kaasoo wacdaro ka dhigaya horyaalka Premier League xilli-cayaareedkan.
Xiddiga u dhashay dalka Portugal ee Bruno Fernandes ayaa loosoo bandhigi doonaa qandaraas laba jibbaar lacagta uu haatan ka qaato Old Trafford ah si ay United usii dheereeyso joogitaankiisa kooxda.
Qandaraaskan Cusub ee Bruno loosoo bandhigi doono ayaa la saxeexi doonaa kaddib markii ay kooxda Red Devils dhammeeysato tartanka Uefa Europa League oo ay Fiinaalkiisa la cayaareeyso kooxda Villareal ee dalka Spain.
Waxaa la rumeysan yahay in madaxda Man United ay la kulmi doonaan wakiillada Fernandes ’ka hor inta uusan bilaaban Koobka Qaramada Yurub’ bisha Juun si ay uga wada hadlaan arrimahan la xiriira qandaraas kordhinta.
United ayaa diyaar u ah inay usoo bandhigto xiddigooda mushaar kor u dhaafaya 200,000 ginni isbuucii.
Laakiin waxaa jiri doona kaliya shan maalmood oo u dhaxaynaysa dhammaadka FIinaalka Europa League iyo inta aanu Bruno ku biirin xulkiisa Portugal oo uu kala qeyb galayo Koobka Qaramada Yurub, waxaana la rumeysanyahay in United ay muddadaas gaaban wax ku xalin karto.
Fernandes, oo 26 jir ah, ayaa ahaa mid soo bandhigaya waxqabad il-qabad leh tan iyo markii uu kasoo dhaqaaqay kooxdiisii Sporting Lisbon isagoo United u saxeexay heshiis shan sano iyo bar ah bishii Janaayo 2020 markii uu Old Trafford ugu soo wareegayay adduun lacageed gaaraya 50 milyan oo ginni
Bartilmaameedkii Arsenal, Liverpool iyo Man City Oo Codsaday In La Iibiyo